🥇 Franchise katarogu
Isa iyo application
Kupinda kana kunyoresa
Wedzera franchise yemahara
Auto zvikamu chitoro
Mota zvishongedzo chitoro
Kudya zvine hutano
Kugadzira bepa remuchimbuzi
Kugadzira kwekupfeka zvipfeko
Kugadzira zvigadzirwa zvepurasitiki
Kugadzira zvinhu zvekuvaka
Kugadzirwa kwemakemikari epamba
Kugadzirwa kwemotokari makemikari zvinhu
Kugadzirwa kwezvivakwa zvesimbi
Yako yekuzvirovera-pfumo kugadzirwa
Zvichienderana zvidhinha kugadzirwa
Gadzira nzvimbo yebasa
Kugadziriswa kwakasiyana siyana
Chitoro che Instagram
Chitoro cheinjiniya yehutsanana
Imba midziyo yemagetsi chitoro
Tenga zvekugadzira zvinwiwa
Vinyl rekodhi chitoro
Yakagadziriswa mutengo chitoro
Floor inovhara chitoro
Martial arts kirabhu
Mitambo yezvokudya chitoro
Zvemitambo zvinovaka muviri
Chikafu chevana mumugwagwa
Dziva revana rekushambira
Kirabhu yemitambo yevana
Yevana nzvimbo yekudzidzisa
Yevana pikicha studio
Zvikoro zvevana zvebhora
Chitoro chejasi rejasi
Chitoro chekupfeka neshangu
Chitoro chekupfeka online pa Instagram
Chitoro chevarume chekupfeka
Avhareji Akhtuba RP
Chiedza chine ruvara
dombo pane obi
Gungwa rakamonyoroka 2
Sravana Sameeralu Serial 4th Indianapolis
St. Petersburg INSERT MU TBCITES (id, id_tbCountries, zita, id_tbLangs, sysname) VALUES (USA)
Hapana chekutanga bundu-sum kubhadhara
Investment inodiwa $
Chishoma chekudyara chinosvika kumadhora zana
Akachipa echirume mafranchise ari pasi pe $ 1000
Yakaderera mutengo franchise inosvika kumadhora mazana matatu
Mari diki diki pasi pe $ 4000
Yakachipa inodonhedzwa inosvika kumadhora mazana mashanu
Franchise ine diki investments inosvika $ 20000
Economy franchise inosvika kumadhora 30000
Zvidiki zvinobviswa kusvika pamadhora mazana matatu
Bhizinesi franchise haidhuri pasi pe $ 50000
Bhizinesi nemari yekudyara inosvika kumadhora 75000
Makuru anodhonzwa anosvika kumadhora zviuru zana
Mahara franchise anodarika $ 100,000
Franchise inotengeswa nemadzimambo
MaFranchise anokurumidza kubhadhara - mumwedzi mumwe
Kurumidza kubhadharisa franchise - kubva pamwedzi mumwe kusvika pamwedzi mitatu
Kubhadhara kweiyo franchise kubva pamwedzi mina kusvika gore rimwe
Iyo yekubhadhara nguva yeiyo franchise inopfuura 1 gore
Unogona kusarudza akawanda maitiro
Kumataundi madiki, madiki madiki, taundi diki
Imba franchise. Unogona kushanda kubva kumba
Yenguva pfupi inobviswa
Inobatsira, mari inobatsira kwazvo
Vhura chitoro chefranchise
Zvitoro zvine zvinhu zvakachipa
Online franchise, online chitoro
Franchise kubva pakutanga
Inguva yakareba sei sangano rave richishanda
1 kusvika kumakore matatu ekuberekwa
Makore mana kusvika gumi ekuberekwa
.Makore mana kusvika gumi ekuberekwa
Anopfuura makore gumi
Tsvaga nemazita ezita uye zvinyorwa zvemashoko. Iwe unogona zvakare kutsvaga nemako manotsi.
Bhalisa kana kupinda kuti ushandise ruzivo rwemunhu
Tarisa gare gare
Tsamba iyi yaisaonekwa
Tsamba yacho haina kupindurwa
Pane mitsva mitsva kwandiri
Ratidza zvese zvekutsvaga
USU - Yenyika Yose Accounting System
Mari yekutanga: 0 $
Investment inodiwa: 0 $
Imba: 0 $
Kubhadhara. Nhamba yemwedzi: 1
Chikamu: Zvirongwa, Accounting
Zvirongwa zvemhando ipi neipi yebhizinesi! Izvo hazvigoneke kune bhizinesi risina software kudzora basa rebhizinesi uye nezvose zvaro zviitiko zvechiitiko. Zuva rega rega kambani yakadaro inowana kurasikirwa kukuru nekuti haigone kuongorora kushomeka kwayo nekuigadzirisa. Chinongedzo chisina kusimba chinogona kuva chero chinhu: chinhu chisingafarirwe icho sangano rinoramba richitenga kutengesa; sevhisi isingaunze purofiti inotarisirwa nekuda kwekushambadzira kwakaipa; vashandi vebhizinesi, vane basa rakaringana risingakwani; uye zvimwe zvakawanda. Iva mumiriri wedu munyika yako kana guta uye uwane pane chikamu chinonyanya kugadziriswa - pane bhizinesi!
Pane video here
Wona tsananguro izere
Unogona kutenga kuwana kwekutanga kuti uone huwandu hwakadzama
Mari yekutanga: 30000 $
Investment inodiwa: 3000 $
Imba: 4 %
Kubhadhara. Nhamba yemwedzi: 12
Chikamu: Mwana Center, Kukura kwemwana
Tsananguro yeiyo franchise neiyo franchisor: 2 zvikonzero zvekuvhura yako wega kirabhu yevaraidzo yevana: - haisi tsika kuponesa pavana, - munyika medu kuchine kushomeka kwenzvimbo dzinoronga yemhando yepamusoro uye dzakasiyana zororo revana. Ndeipi netiweki yenzvimbo dzevaraidzo dzevana BAZILLION: - nzvimbo dzinoshanda muMinsk, Brest, Mogilev; - anopfuura matatu makore ebasa rakabudirira; - mhinduro dzakanakisa dzematunhu ane nzvimbo dzakasiyana nenzvimbo; - wega izere kutenderera kwekugadzira, kurongedza uye kumisikidza michina; - seti yemasevhisi evana veese mazera akasiyana - zvinokwezva, michina yemuchadenga, maanimator, mahafi, mazororo; - ese anodikanwa masisitimu ekuronga zvinobudirira basa revashandi. Bhenefiti yeiyo BASILLION franchise: * shanda pasi pechinhu chimwe chete chinovimbwa nevatengi vedu * kudzikiswa muhuwandu hwekudyara kwekuvhura nzvimbo yevana
Mari yekutanga: 15000 $
Investment inodiwa: 20000 $
Imba: 7 %
Kubhadhara. Nhamba yemwedzi: 18
Chikamu: Yevana nzvimbo yekudzidzisa, Dzidzo
Tsananguro yeFranchise nefranchisor: Iva chikamu cheiyo Global Mwana network yemakirabhu edzidzo epasi rese! Joinha mumwe wevatungamiriri vezvidzidzo zvekunze munyika medu. Nhasi Global Mwana ndeye: - nhengo yesangano redzidzo yepasi rose ICEF; - makore manomwe ebasa rakabudirira; - anopfuura gumi nemamwe mapurogiramu ekuvandudza kugona kwevadzidzi vedu; - vanopfuura 1500 vakapedza kudzidza vakapedza kudzidziswa; - zvinopihwa zvemazera akasiyana - kubva pamwedzi mitanhatu kusvika pamakore gumi nerimwe; - kusarudzwa uye kudzidziswa kwevadzidzisi vane ruzivo uye vana vezvepfungwa; - nzira yega yega kumwana mumwe nemumwe panguva ipi neipi. Zvirongwa zveGlobal zveMwana zvinoenderana nenzira yakasarudzika yeBilingual Dzidzo Sisitimu. Iyo kirabhu zvakare inopa mukana kune vana vechikoro kuti vadzidze mutauro wekunze kuEngland, Malta, Spain nedzimwe nyika, kugadzira shamwari dzekudyidzana kuenderera mberi nedzidzo yavo nenzira dzakasiyana.
Mari yekutanga: 10000 $
Imba: 6 %
Kubhadhara. Nhamba yemwedzi: 6
Chikamu: Iyo pfuma
Tsananguro yeiyo franchise neiyo franchisor: RE / MAX LLC (RE / MAX LLC) yakavambwa makore makumi mana apfuura muDenver, Colorado, USA uye parizvino inoshanda munyika dzinopfuura makumi mapfumbamwe pasirese. Kubva munaNdira 2014, RE / MAX yauya kuRepublic of Belarus. RE / MAX inyika inozivikanwa uye inovimbika real estate kambani. Anopfuura makumi manomwe emahofisi anoshanda munyika dzinopfuura makumi mapfumbamwe, achishandisa dzinosvika zana nemakumi maviri ezviuru zvezvivakwa. RE / MAX Franchise RE / MAX ikambani yekutengesa mari umo hofisi nebazi rega rakazvimiririra, asi zvinotevedzera zvakazara mitemo yekambani, mamiriro ebasa nekushandira pamwe, uye kodhi yetsika nehunhu inoremekedzwa. RE / MAX inopa avo vane mafranchise ane akagadzirira-akagadzirwa, akavezwa bhizinesi modhi nerutsigiro ruzere mukati menguva yese yekushanda kwayo, ichibvumira nhengo yega yega yenetiweki kuti ibatsirwe nekushandisa mufananidzo uye mhando yekambani yepasi rose.
Investment inodiwa: 157000 $
Kubhadhara. Nhamba yemwedzi: 36
Chikamu: Kuchenesa yakaoma
Tsananguro yeFranchise nefranchisor: yeSpanish yakaoma yekuchenesa uye yekuwachisa franchise, yakatanga muMadrid muna1994. Kusvika nhasi, kambani iyi yanga ichibudirira kusimudzira pfungwa yayo yebhizinesi munyika makumi maviri nematatu pamakondinendi mashanu, uye ikozvino yazvimisikidza iro basa rekuvandudza network yayo mumusika weBelarusian. Pressto anosarudzira Belarus semusika unovimbisa weiyo yakasimbiswa bhizinesi modhi senge Pressto, uko masevhisi epamusoro ari kuramba achiwedzera kudiwa. Padanho rino rekuvandudza kwemusika wekutengesa mukati Belarus, kudiwa kwekuwachisa uye kuomesa yekuchenesa masevhisi kuri kuwedzera. Nei iyo Pressto franchise iri yakanakisa bhizinesi kudyara. Kumwe kubudirira kukuru kwaPressto kunogona kuverengerwa nenzira dzakasiyana, kubva pamatanho akasarudzika erudzi rumwe nerumwe rwekuchenesa kuomesa mabasa mazhinji mune imwe mbichana. Pressto inopa nyowani bhizinesi pfungwa yakanangana nekuenderera kwekuvandudza uye nekutsvaga maitiro.
Kuti utenge franchise iri nyore, chinhu chikuru kusarudza bhizinesi modhi inokodzera iwe. Unogona kutenga zvese zvaunoda nefranchise, nekuti, sekutonga, iwe unopihwa iro rese bhatani reakakodzera kutanga bhizinesi ruzivo. Kutenga franchise kunobatsirawo nekuti unogona kutanga bhizinesi rinounza huwandu hwakakosha hwepundutso pasina mari yekutengesa. Mutengesi anokupa iwe neruzivo rwese rwaunoda kuti utange kuita mari munguva yekunyora. Iwe unongoda kutenga franchise uye unakirwe nezvose zviitiko zvakaumbwa nevamwe vanhu nguva refu usati wafunga kupinda mune iri bhizinesi. Ehe, iwe unofanirwa kuwana iyo franchise inokodzera zvaunofarira uye kugona. Semuenzaniso, kana iwe usina mari yekuvhura ketani yekuresitorendi, saka haugone kutenga franchise. Ehezve, makambani anopa mukana wekutora franchise cheki vangangove vatengi, uye zvikanganiso mune izvi maitiro hazviwanzo. Kana iwe ukafunga kutora franchise, saka iwe ndiwe franchisee, mutengi akananga weiyi bhizinesi modhi.
Iwe unogona kuve muzvinabhizimusi uye shandisa zita rinotonzwika nemunhu wese. Iwe zvakare unowana yakagadzirira-yakagadzirwa pfungwa uye usatange chero chinhu kubva kune isina zvachose isina slate. MuRussia, kutengesa mari kwawana mukurumbira kwenguva yakareba uye muna 2021 ndeimwe yemhando dzebhizinesi dzinoita sedzinopa mari iri nyore mushure mekudyara. Hazvisi zvese zviri nyore, zvisinei, kutenga franchise kuchiri nyore pane kutanga bhizinesi kubva pakutanga. Kudzivirira mutengo wekugadzira logo, kubvisa kudiwa kwekugadzira yako wega dhizaini uye dhizaini, zvese zvinoita kuti zvive nyore kutumira bhizinesi rako modhi. Izvo zvakakwana kungotenga ruzivo rwakakosha uye kurishandisa kukurumidza kuwedzera huwandu hwemari yemari.
Kutenga franchise hazvireve kuti kuitenga zvachose. Iwe unogona kubvarura mukana wekushandisa iyo mhando uye zvese zvishandiso zvinouya nayo kwechinguva. Kazhinji, ma franchisees vanobhadhara mari-yemari. Mupiro wemari yakawanda unonzwisiswa semukana wekushandisa imwe mhando yebhizimusi zviitiko, iyo yatove bhizinesi modhi, kuti uwane mari zviwanikwa. Iwe unogona kuzviitira iwe, shandisa tekinoroji iripo, shandisa izvo zvigadzirwa zvakapihwa, uye woisa chiratidzo kana chiratidzo. Inoshanda mushe mushe pane chero nzvimbo uye mune chero nyika. Nekudaro, iwe haungakwanise kugara uchikwanisa kutenga iyo franchise uye nekuisimudzira mudunhu rako. Izvo zvinodikanwa kuti unyatsoongorora mukana wekushandisa ichi chiratidzo uye bhizinesi modhi munzvimbo yemuno nharaunda. Kana iwe ukafunga kutenga iyo franchise, saka zvinowanzo fanirwa kugadzirisa zvimwe kune iripo modhi.
Izvi zvinogona kuve kuwedzerwa kwechero diki diki, hushe, izvo zvinoratidzira chete kunharaunda yako. Inopa kuwedzera kwakanyanya kwevatengi uye chinhu chakadai chinogona kushandiswa sechikamu chemushandirapamwe wekushambadzira. Paunenge iwe wafunga kutenga iyo franchise, iwe unofanirwa kutora matanho nekukasira kuitira kuti mari iripe. Iyo franchise inogona zvakare kazhinji kuve fomu yekutengesa chiratidzo. Semutemo, chibvumirano chakakosha chinogadzirwa pakati pemutengesi nemutengesi. Aya ndiwo maitiro ekutenga franchise. Iwe unotungamirwa nechibvumirano mukuitwa kwebasa rehofisi uye bhizinesi rako riri kukwira kumusoro.
Isu tinokurudzira kuti iwe utenge chaizvo iyo franchise iyo yaunofarira iwe uye yaunogona kudyidzana zvine zvibereko, pamwe nekuwana zvakanyanya kubva kune yako mari. Iye franchisor anogamuchira mvumo kubva kwauri yekushandisa yavo yekutengesa kana kuziva-sei. Zvakare, kugoverwa kwezvinhu zvakasvibirira kunowanzo kupihwa muchibvumirano. Maitiro ekugadzirisa, kudzidziswa kwevashandi, zvese izvi zvinosanganisirwa muchibvumirano. Izvo zvakakwana kungotenga inoenderana kurudyi. Iwe unogona kuwana franchise yekushandisa ese eanozivikanwa matipi kuti apfuudzirwe kwauri kubva kumutengesi. Mitemo yekushandiswa kwechinhu chigadzirwa inotauriranawo zvakasiyana. Vanogona kuve vese vakasununguka uye vakaomarara, zvese zvinoenderana nezvinangwa zvinoteedzerwa nemativi ese. Iye franchisee anobhadhara izvo zvinopihwa kupihwa mvumo yekuita bhizinesi achishandisa chirongwa chaanacho. Iwe haugone kutenga kwete chete kodzero dzekushandisa iyo mhando asiwo neruzivo rwese rwakawedzerwa, matekinoroji, uye mhando dzezviwanikwa zvaungangoda panguva yekushanda kwemauto
Chitoro chefranchise imhando yepuratifomu uko kwakapihwa akasiyana ezviratidzo anoiswa kubazi ravo kuvhura mune rimwe guta kana nyika. Chitoro chakadai chinogona kushandiswa nevanhu vanotsvaga kusimudzira yavo bhizinesi. Chitoro chakadai chinoratidzwa nekuvapo kwenhamba hombe yezvipenga zvakasiyana mumhando yazvino. Kana iwe uchifarira mafranchise, saka iri mune yakasarudzika fomati shopu yaunofanira kuzvitsvaga. Izvo zvakakosha kuti chitoro chakadai chine huwandu hunodiwa hwezvakakodzera zvinopihwa, zvikasadaro, hapana poindi yacho. MaFranchise uye rondedzero yavo vanofanirwa kupihwa kutarisisa kwakaringana, uye chitoro chinokwanisa kubatsira vanhu vanoda kuwana mukana wekuita zviitiko zvebhizinesi zvinoenderana nechirongwa chiripo.
Iyo franchise imwe maitiro kana seti yakazara yezvinhu zvakasiyana siyana izvo mutengi anowana kuti asunungure uye kusimudzira ega. Panguva imwecheteyo, iyo kambani yakatengesa iyo franchise inozvibatsira. Zviri nyore kwazvo kushandisa chitoro kunoiswa zvinhu zvakadaro kuitira kuti ugone kusarudza yakakodzera. Semuenzaniso, muzvinashawo anoda kutora zviwanikwa zvemari uye anoda kushandisa chimwe chiratidzo chinozivikanwa pasi rese. Muchengeti wemari anongoenda kuchitoro osarudza chigadzirwa chinomukodzera zvakanyanya. Kana chitoro chakadai chine tsananguro yakadzama yeiyo franchise, saka unogona kutora sarudzo ipapo ipapo. Mamiriro acho anowanzo kurukurwa zvega, uye kana iyo franchise yatengwa nemutengi chete mukati mechitoro, makwikwi anogona kurongwa. Ichi chiitiko kuitira kuti mutengi asarudze akanakisa acho.
Chitoro chemazuva ano chinofanirwa kushanda zvisina tsarukano, sezvo iri riri bhizimusi rakakomba kwazvo. Makambani mazhinji anoda kupinda mumisika yakavakidzana anokwanisa kuwana muchitoro ichi. Unogona kuwana chero franchise yaunoda kana iwe ukaenda kudepoti yakadai. Izvi zviri nyore kwazvo nekuti ruzivo rwese rwunodiwa rwunopihwa pane imwe saiti. Kubatanidzwa kwemafranchise ese mupuratifomu imwe kunova chaizvo depo iyo inopa mukana wekutenga zvigadzirwa zvakakodzerana maererano neseti yezvinodiwa. Kana iwe uchida depo, saka saiti yakadaro inogona kuwanikwa paInternet. Uyezve, zvirinani chitoro, paine akawanda mafranchise ariko. Huwandu hukuru hwezvikumbiro hunopa mukana wakanaka wekuita sarudzo chaiyo.
Tsananguro yakadzama yeiyo franchise inobatsira iwe kuti unzwisise kana ichienderana nezvaunoda uye kana zvichikwanisika kusimudzira mune imwe nharaunda. Mukati mechitoro, iwe unokwanisa kuenzanisa dzakasiyana sarudzo. Nekuda kweizvozvo, zvinokwanisika kusarudza yakanakisa. Kutenda kuchitoro chakakomborerwa, vanamuzvinabhizinesi vanoda kuisa mari zviwanikwa uye vanoshandisa chiratidzo chiripo uye chinozivikanwa vanokwanisa kuita zvirongwa zvavo nekukurumidza uye zvine hunyanzvi. Panofanirwa kuve nekureruka kufamba kuti uwane iyo chaiyo franchise. Chitoro chakadai chinoshanda paInternet, uye mukurumbira wemhando idzo dzinoiswa pairi zvinoenderana nekugadzikana uye kuchengetedzeka. Sezvingatarisirwa, depo rakadai rinofanirwa kusangana nezvose zvinodiwa kuchengetedzwa uye riine zvitupa zvinodiwa. Dhipatimendi remazuva ano rinofanira kugara richipa ruzivo rwakakwana nezve zvigadzirwa zvarinopa. Chitoro chefranchise hachina kusarudzika nekuti chinofanirwa kusangana nezvinodiwa zvemamiriro azvino.
Kutenda papuratifomu yakadaro, unogona kunyatsobatana nevamiriri vemhando dzakasiyana dzemhando. Izvo zvinokwanisika kutaurirana kana iyo franchise chitoro yakanyatsogadzirwa.
Paunenge uchisarudza chitoro chefranchise, chinhu chikuru hachisi chekukanganisa, nekuti iri rakakosha basa rebhizinesi, nekuti muzvinashawo anosarudza nzvimbo yaanoisa mari zviwanikwa. Chitoro chefranchise chinopa chero munhu ane seti inoshanda yezvakasiyana zvinopihwa. Mafranchise anogona kukwidziridzwa achifunga nezvematunhu akasarudzika. Kazhinji, izvi zvinongodiwa uye tsananguro yakadzama yezve mamiriro ezvinhu ayo mutengesi anopa kune mutengi anofanira kupihwa mukati mechitoro. Matanho akadaro anotendera anogona kuve muzvinabhizimusi uyo anoda kuita franchising kuti aite sarudzo chaiyo pachirongwa chakadai.
Iyo franchise catalog irondedzero yezvazvino bhizinesi kusimudzira zvirevo zvichibva pane iripo inozivikanwa brand. Dhairekitori rakadai rinogona kushandiswa namuzvinabhizimusi uyo anoda kuisa mari zviwanikwa uye asingade kuvandudza bhizinesi kubva pakutanga panguva imwe chete. Iyo katalog yakanakira munhu akadaro. Yese franchise pamusika yakanyorwa pano. Kutenda kune yakadai katalog, zvinokwanisika kusarudza inonyanya kufarirwa uye inonyanya kukodzera niche. Katalog yakadai inoitawo kuti zvikwanise kukurumidza kubata mutengesi uye kubvunza mibvunzo yekufarira. Mukati megadziriro yebhuku rekutengesa, kwete chete zvinopihwa zvakakosha zvinofanirwa kuunzwa, asiwo tsananguro yerudzi urwu rwechigadzirwa inofanirwa kuwanikwa. Kutenda kurondedzero iyi, zvinokwanisika kuita chaiyo uye inokwanisa manejimendi sarudzo. Iwe haugone kuita pasina katarogu yeiyo franchise kana mutengi angangoda kutsvaga sarudzo yakakodzera kwazvo.
Ndeipi catalog franchise inogona kusununguka kana kubhadharwa zvinoenderana nemuridzi wesaiti. Panguva imwecheteyo, ivo vatengesi pachavo vanobhadhara mukana wekutumira pane saiti yakadaro kana chimwe chinofambisa ruzivo chishandiso. Kutenda kubhuku rekutengesa, zvinokwanisika kukwezva vatengi vatsva. Mutengi wefranchise anonzi franchisee. Iye anowana mukana wekuita bhizinesi maererano nechirongwa chiripo, icho chinopihwa kumutengi. Urongwa uhu hwakagadziriswa nemutengesi, nepo iye mutengesi pachezvake achitakura zvese zvinodikanwa zvekugadzirira, kuvhura, nekuita zviitiko zvebhizinesi chinhu. Izvi zviri nyore kwazvo kune avo vanhu vane mukana wekudyara zviwanikwa zvemari asi vasingade kugadzira chinhu chitsva. Ivo vanotora yakagadzirirwa-yakagadzirwa franchise, iri nyore kwazvo kwavari. Kune rimwe divi, iyo catalog inokubatsira iwe kuita yako sarudzo, ita sarudzo chaiyo yekutarisira, uye uwane iyo yakanyanya mari kubva kumari yakaiswa mari.
Mukati meiyo franchise catalog, iwe unogona kudoma saizi yemubhadharo wemari-yemari. Uku ndiko kukosha kwefranchise, iyo inogadziriswa uye iyo iyo franchisor inogamuchira kubva kune iyo franchisee pakutanga danho. Izvi zvinogona kuve zvingangoita gumi muzana yemitengo yese yekutanga-up. Panguva imwecheteyo, mukati mehurongwa hwebhuku rekubiridzira, unogona kudoma tsananguro dzinotsanangura mazwi ekubatana mune zvakadzama ruzivo. Semuenzaniso, iro rinonzi bhuku rebhizinesi rinogona kupihwa sebhonasi. Icho hachisi chinhu chinopfuura chakanyatso nyorwa mutemo unobvumidza kurongeka kwezviito nenzira inoshanda kwazvo. Kuvhiya kumwe chete kunoitirwa kuvaka chitupa, kuvhura kushambadza, uye mamwe mashandiro ane chekuita nekudyidzana nevatengi. Izvo zvinonzi bhuku rebhuku rinokubatsira kufamba nenzira yekudyidzana zvakanaka nevangangove vatengi. Izvo chete mukati mehurongwa hweiyo franchise catalog, izvi zvinhu zvinofanirwa kutsanangurwa zvakadzama uye izvi zvinobatsira mutengi anogona kuita sarudzo kwayo.
Kana iyo kirabhu yemafranchise iri yazvino-kumusoro, saka inonyora zvese zviripo zvino uye vangangove vatengi vanogona kuwana akanakisa acho. Catalog yakadaro inobvumidza kutengesa mamwe mafranchise sezvo iwo ese ari panzvimbo imwechete. Iyo katarogu inofanirwa kuve yakagadzirirwa-yakagadzirirwa uye kunyatsogadziriswa. Matanho akadaro anorerutsa kufamba uye anoita kuti kushandiswa kwekatalogi kuve kwakanyanya kushanda uye kunakidze nzira yevatengi. Kana iwe uchida katarogu, zvirinani kuinyora nemazvo uye zvine hunyanzvi. MaFranchise anofanirwa kupihwa kutarisisa kunodiwa kuti ave nechokwadi chekuti hapana zvikanganiso zvezvinhu zvinomuka mutsananguro yavo. Kutenda kukatalog yeiyo franchise, vazhinji vanogona vatengi vanogona kuwana avo vatengesi uye bhizinesi rinotanga kusimuka, uye matavi ese matsva achavhura mumaguta akapoteredza nenyika.
Inoshanda franchise katarogu inofanirwa kuve yakagadzirirwa kufamba kwakaringana kumushandisi kuti ugone kuwana mhinduro yakakodzera kwazvo. Kutenda kubhuku rekutengesa mari mutengi wese anokwanisa kubata chero mabasa evafundisi sechikamu chekutsvaga ruzivo runovanakira zvakanyanya.
Bhizinesi rekutengesa rinofanira kusimudzirwa pasi pemitemo yakapihwa nemutengesi. Iye mutengesi anonzi neimwe nzira franchisor uye anosiyana pakuti kuti kodzero yekushandisa ruzivo-kana chiratidzo, anotambira imwe mari kubva kune inonzi franchise. Izvozvowo, zvakare, inosungirwa kubhadhara mipiro, inoendeswa kune kodzero yekuita bhizinesi uchishandisa chirongwa chakapihwa. Iyo scheme inovandudzwa nevamiriri veiyo franchisor, nepo mitengo yese yekutangisa nekugadzirira bhizinesi inotakurwa neanowana iye pachake.
Iyo franchise, kune rumwe rutivi, ndiyo inoshanda inoshanda sisitimu iyo inotsanangura zvakadzama maitiro ese, mamiriro, uye zvinhu, izvo zvinobvumidza kuitisa bhizinesi zvakanyanya kwazvo. Panguva imwecheteyo, maitiro ekuita bhizinesi anofanirwa kutevedzera zvikumbiro zvemufranchisor. Ndipo panguva iyo iyo iyo franchise inova inoshanda senge inokwanisika, uye bhizinesi rinopihwa huwandu hwechengetedzo yainoda. Ivo vanamuzvinabhizimusi vanobudirira kwazvo vanokwanisa kuteedzera zvizere mashandiro evafundisi, uye vamwe vacho vanotoita gadziridzo yavo. Ose mashandiro uye kunyange shanduko dzinokurukurwa nemutengesi, sezvo iyi iri mirawo.
Mushure mekupera kwechibvumirano, zvinokwanisika kutanga bhizinesi uchishandisa franchise. Matanho akadaro anotendera mutengi kuti akurumidze kuita purofiti pane inivhesitimendi nekuti kutengesa mari hachisi chinhu kunze kwekudyara kwemari zviwanikwa mune iripo, yakasimbiswa, uye yakaratidza muenzaniso. Iyi bhizinesi modhi inobvumidza nemazvo kuita hofisi mashandiro, tichifunga nezvematunhu akasarudzika. Dzimwe nguva franchise yacho haishande kana maitiro ebhizinesi akavakwa zvisirizvo kana nzvimbo yakatenderedza isingaenderane neyaive kumusha kweprojekti.
Bhizinesi rekutengesa rinogona kuonekwa zuva rega rega mumigwagwa yemaguta ako. Inogona kuve chero cafe, shopu, bhabhashopu, kana rimwe sangano. Kunyangwe McDonald's uye KFC ari mafranchise ane anoshamisa madanho epamusoro ekuzivikanwa. Zvese kuvhura franchise uye kuita bhizinesi zviito zvichitevera chirongwa zvakatemerwa muchibvumirano. Chibvumirano chinogadziriswa kugadzirisa kusawirirana kwese uye kuti mapato ega ega azive kodzero uye zvisungo zvavo. Kana iwe uchizomhanyisa bhizinesi rekutenga, zvakakodzera kusarudza mhando yakakodzera kwazvo yebhizinesi. Zvakare, uchifunga nezve zvakasarudzika zvezviitiko mudunhu rako zvakakosha zvakanyanya. Semuenzaniso, tinogona kufunga nezvekutengeswa kwepancake naMcDonald's kuRussia. Mukana wemazuva ano wekumhanyisa bhizinesi rekutengesa unopa mikana isinga gumi yekubudirira kune avo vanhu vane zviwanikwa zvemari zvemahara uye vanoda kuzviisa zvinobudirira.
Rudzi urwu rwebhizinesi runoshanda zvakanyanya kupfuura kukwidziridzwa kwechiratidzo kubva pakutanga. Mumwe muzvinabhizimusi akatokwanisa kugadzira modhi yakadaro uye kugovana ruzivo rwake kune imwe muzana. Izvi zviri nyore kwazvo sezvo bhizinesi rekutengesa rinokupa iwe nemukana wakanaka kwazvo wekusatanga chero chinhu chitsva, asi kushandisa sarudzo iripo. Bhizinesi rakadaro rinoshanda nemazvo kana zvese zvigadzirwa zvekugadzira zvikaitwa maererano nemirau yakatemwa muchibvumirano. Bhizinesi rekutengesa rinokura nekumhanyisa mhanyisa kana shanduko dzakabvumiranwa nemutengesi, izvo zvinozotarisa zvakatarwa nedunhu.
Kune avo vanoda kutanga bhizinesi rekutengesa, saiti yakakosha, katalog, kana chitoro chinodiwa, uko kupihwa kwazvino kupihwa pamusika kunopihwa. Nerubatsiro rweyakadai katalog, iwe unogona nyore kusarudza yakasarudzika sarudzo. Shanda nebhizinesi rekutengesa, uchisarudza iro rakakodzera gwara raunogona kubata nemazvo nebasa riripo. Kutenda kune iro bhizinesi rezvitoro chete, vanhu vazhinji vakawedzera zvakanyanya mari yavo yekutanga. Mushure mekudyara mubhizimusi rekutengesa, unogona kutarisira kuwana chikamu chepamusoro chemari. Kudzoka pane ino investa kazhinji kwakanyanya kukwirira. Izvi ndizvo zvinoita kuti huwandu hwepamusoro hwekuzivikanwa hwerudzi urwu rwebhizinesi huvepo. Vanhu vazhinji vanongoda kuisa mari zviwanikwa mune imwe modhi yakatove yakaedzwa nekunatswa pamusoro pemakore.
Goverana neshamwari dzako kana chengetera kero peji rino iwe
Saiti manejimendi: info@FranchiseForEveryone.com
Youtube Nhau chiteshi
Kana iwe ukaona typo, kuti uigadzirise, sarudza iyo yekukanganisa mameseji negonzo uye tinya iyo Enter kiyi
Kana iwe ukaona typo, tinya pano kuti uigadzirise